Waa maxay ifafaalaha saadaasha hawada ee cirifka | Saadaasha Shabakadda
Maalmihii ugu dambeeyay aagga Cantabrian oo dhan waxaa laga dareemayaa mid ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee ugu caansan uguna soo noqnoqda xilligaas sanadka, waa cirif. In kastoo hubaal magiciisu waa kuu muuqdaa, Waxay u badan tahay inaadan ogeyn waxa ifafaalahaani ka kooban yahay, marka waxaan kuu sharaxayaa si aan u caddeeyo dhammaan shakigaaga.
Dareerku wuxuu dhacaa marka laba hawo isku dhacaan, midkoodna waa qalalan yahay oo diirran yahay kan kalena qoyaan iyo qabow. Shilkani wuxuu sababi doonaa samaysma dabaylo wata dabaylo gaadhaya ilaa 100 kiilomitir saacaddii iyo hoos udhaca heerkulka ilaa 10 digrii marka loo eego celceliska waqtiga. Waxaas oo dhan waxaa inta badan la socda roobab aad u xoog badan iyo duufaanno cajaa’ib leh oo badanaa keena hirarka badda ilaa 9 mitir.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan cirifku waa inay tahay dhacdo saadaasha hawada oo badanaa socotaa daqiiqado yar, taasoo keenta cimilo qoyan iyo roob da 'laakiin aan wax dhibaato ah qabin. Sidaan kuu sheegayba, dhawr maalmood ayaa deegaanka Cantabrian oo dhami la dhibaataysnaa dhacdadan oo waxay sababtay dabaylo duufaanno wata oo gaaraya 90 km / saacaddii iyo roob ka badan 40 mitir mitirkiiba. Sannadkii 1961-kii, ayaa waxaa dhacay mid ka mid ah il-baxyadii ugu xumaa taariikhda maaddaama ay ku dhammaatay sababidda tirada nasiib-darrada ah ee dhimashada 83 ay sabab u tahay dabeylaha xoogga duufaanka iyo roobab tiro badan oo ku da'ay aagga oo dhan.
Waqtigaan la joogo, waxaa suurtagal ah in si wanaagsan horay loo sii ogaado goorta cirifka caanka ah la soo saari karo oo sidan looga fogaan karo suurtagalnimada alaab iyo dhaawac shaqsiyeed. Taasi waa sababta inkasta oo ay tahay dhacdo dhab ah oo khatar ah, Waxaa lagu xakamayn karaa xuduudaha aasaasiga ah waxayna ka hortagi kartaa waxyeelo sida tii dhacday 1961.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay ifafaalaha saadaasha hawada ee cirifka
Isbedelka cimilada maanta wuxuu bilaabmay 180 sano ka hor